Uyikhetha njani icwecwe elibonisa uyilo -Ii-Creativos ezikwi-Intanethi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uyikhetha njani itafile yemizobo yokuyila
UJose Angel | | Idizayini yeMifanekiso, Izixhobo zoYilo
Ukuphonononga imida yoyilo lwegraphic nakweyiphi na intsimi kusenza ukuba sifune ukuya phambili. Kwaye xa siyile kwezona meko zinzima, sifuna intuthuzelo. Intuthuzelo iyancitshiswa kwimithintelo embalwa kangangoko ukuzoba. Ikhibhodi kunye nomda wokunciphisa ubuchule kunqakrazo olumbalwa. Kungenxa yoko ngamanye amaxesha sidinga iCwecwe leMizobo ukuze sisebenze.
Ithebhulethi yemizobo yinto esetyenziswa ngokubanzi. Lulwandiso lomzobo osimahla. Kodwa ayisoloko ingamava amahle. Ngamanye amaxesha sithenga into enexabiso eliphantsi kwaye siyaphoxeka kuyo ukuthungwa, ubuntununtunu kunye nobunzima bepeni. Inqaku lendawo encinci yokuzoba. Kodwa phantse yonke into iya kuxhomekeka kwixabiso. Kwaye nditsho phantse yonke into, kuba kweli nqaku siza kukhangela ixabiso elifanelekileyo kunye nomgangatho ophakamileyo wokukhetha ithebhulethi elungileyo ngaphandle kokubambisa ngayo.
Kule meko ayiphathwa njengakwezinye iimeko zesoftware. Inkqubo ye- ezona mpawu ziphambili ekufuneka icwecwe elibonisa imizobo: Ubungakanani, indawo, uxinzelelo lwepeni, ukufudumala kunye nokusombulula phakathi kwabanye. Ke, xa sigqibe ekubeni siyifumane, masazi ukuba ngawaphi amanqaku ekufuneka sithathele kuwo isigqibo.
1 Ubungakanani obubalulekileyo
2 Indawo yokusebenza yethebhulethi
3 Inqanaba loxinzelelo
7 Ezinye iinkalo
Ukuba ubungakanani bethebhulethi yemizobo bukhulu, iya kwenza imisebenzi emininzi Kwaye uya kuba namathuba amakhulu. Oku kungenxa yendawo esinayo kuyo. Kuyinyani ukuba okukhona ubungakanani bayo busanda, kunjalo nangendleko zayo, yiyo loo nto siza kuwuxabisa umsebenzi wethu kunye nokubaluleka kwawo kokuthatha isigqibo komnye okanye komnye.
Nceda uqaphele oko ukuba umsebenzi wakho ufuna ukuhambaNokuba yindiza, uloliwe okanye imoto, ithebhulethi enkulu yemizobo isenokungakulungeli. Kule meko ithebhulethi yemizobo ye-Intuos S inokulungela iimfuno. I-Intuos S yiyo ithebhulethi yemizobo elula, enye yezona zincincis kwimarike, ekulula ukuyihambisa kunye nemisebenzi encinci. Oku akuthethi ukuba ayinamathuba, sele sisazi ukuba izixhobo ayizizo zonke izinto kwaye eyona nto ibalulekileyo kukuzinikela kunye nomzamo.
Ukuba izixhobo zakho zomsebenzi zizakusetyenziswa eofisini okanye ekhaya Kwaye ukuba uzama ukwenza iiprojekthi ezinkulu, icwecwe elikhulu lomzobo kunye nescreen esidityanisiweyo liya kuba luncedo kakhulu. Ngale ndlela uya kusebenza ngokuthe ngqo kunye neprojekthi ngaphandle kokufuna iziphumo kwiscreen sangaphandle. Uluhlu lweCintiq ukusuka kwiWacom okanye iGT esuka eHuion zikulungele oku. Imodeli eya kufunyanwa iya kuxhomekeka kumandla okuthenga ngamnye.
Ukuba sifumana ixabiso lakho, Masibone ukuba ungahamba njani ukusuka kwi- € 60 ukuya ngaphezulu kwe- € 1000. I-Wacom Intuos S yimodeli elula okanye kuluhlu lweHuion, ithebhulethi ye-1060 ejikeleze i-80 euros inokuxabisa ukhetho lokuqala. Kwimeko yokufuna imodeli enamandla ngakumbi kwaye inkulu, imodeli kaWacom Cintiq ngexabiso eliphezulu kakhulu inokuba sisisombululo. Le modeli ihlala ibonwa kuyilo olukhulu, amagcisa tattoo kunye neeofisi ezidumileyo ezinemisebenzi emikhulu.
Indawo yokusebenza yethebhulethi
Ngamanye amaxesha ithebhulethi enkulu yemizobo inokukukhohlisa. Kwaye kukuthi xa ujonga nje kuqala singayithanda inkangeleko yayo kodwa xa sikhupha kwaye silungisa ikhompyuter yethu, siyaqonda ukuba into ayintle njengoko ibibonakala. Ngaphambi koko, masibone ubungakanani bakho obusebenzayo. Abanye ngenxa yamaqhosha, abanye mhlawumbi, ngenxa yomgangatho wehardware, banciphisa ubungakanani bommandla wabo. Ukujonga zombini, sinokuqala sijonge kwinkcazo.
Indawo yokusebenza enokusetyenzwa ayilingani nobungakanani beyona thebhulethi yemizobo. Sinokuzoba kuphela kwindawo ebonisiweyo. Ukwazi indawo esinayo yomzobo sinokujonga eminye imigca (eqhubekayo okanye engayekiyo) evala loo ndawo.
Incinci: 152 x 95 mm
Phakathi: 216 x 135 mm
Le milinganiselo yile sizakuyithelekisa nenye. Ngaphezulu kwako konke, kuya kufuneka ujonge ngokusondeleyo kwindawo esebenzayo.
Ukunyuka koxinzelelo lweemvakalelo, kokukhona unokulawula ubungqongqo bemigca ukuba uzoba ngokusekwe ekubeni ucinezela kangakanani usiba kumphezulu wethebhulethi. Eli nqaku libalulekile kuba uyakufuna ukwazi ukuba mangaphi amanqaku oxinzelelo kwitafile nganye yemizobo.
Ezona pilisi zemizobo zicetyiswayo zinamanqanaba oxinzelelo angama-2048. Eli nani liza kuba lililo ekusebenziseni kwalo, nangona kwezinye iimodeli zinikezela ngamanqanaba oxinzelelo ngakumbi, ezi azizukunika umohluko omkhulu. Kuba ukuba ufumana imodeli enamanqanaba amaninzi, musa ukuwanika isikali sakho.
Amaqhosha ayikho enye into ngaphandle kwe indlela emfutshane yokukhawulezisa umsebenzi wethu. Ziluncedo ngokwenene kodwa ayizizo zonke ezinazo. Njengoko besesitshilo ngaphambili, ngokuxhomekeke emsebenzini uya kubafuna okanye baya kuba yinto entle onokuyenza ngaphandle. Konke kuxhomekeke kwindlela oyisebenzisa ngayo. Kodwa nokuba umsebenzi wethu kunye nohlahlo-lwabiwo mali lilinganiselwe, kuya kufuneka siqwalasele kubandakanya amaqhosha.
Khawufane ucinge ngomsebenzi wakho, apho kuya kufuneka usike iindawo ezithile, uncamathisele kwezinye, ngamanye amaxesha ngaphandle kokulahla umbono wescreen. Kule meko, uchukumisa indibaniselwano 'yolawulo + C' okanye enye indibaniselwano eyinkimbinkimbi, uya kuwaphosa amaqhosha abo ubufanele ukuba unayo. Lo mbandela ndicinga ukuba ibalulekile ekongeni ixesha kunye neempazamo ezinokwenzeka.
Olu phawu bubungakanani bemivumbo onokuyenza ngee-intshi. Oko kukuthi, ukuba ungazoba imigca eli-10 nge-intshi, isisombululo siya kubanzi kunokuba bekukho 5. Uninzi lweetafile zemizobo ezincinci zinesisombululo se-2.540 lpi, ngelixa Iipilisi zemizobo ezilungileyo bafikelela kabini: 5.080 lpi. Zombini zinokwanela ukufikelela kumanqanaba enkcukacha zobungcali.
Kweli candelo kuya kuba luncedo ukujonga isantya uphononongo lwevidiyo. Kuba ngenxa yeempawu ezininzi kunye namanani abakunika wona, ukuba awuyiboni, ngekhe wazi ukuba iyinyani na. Iividiyo ziya kufundisa ukusetyenziswa kwebrashi ngexesha lokwenyani kwaye siza kubona ukuba iziphatha njani. Oku akukho ngaphezu kokukwazi ukuthumela idatha kwikhompyutha. Kukuphi okufanayo, ngelixa uzobe kwithebhulethi yemizobo ngokukhawuleza umsebenzi uza kuboniswa kwiscreen. Into yendalo iya kuba yeyokukhawuleza kodwa ngamanye amaxesha ayisiyiyo.
Iinkcukacha ezincinci zenza umahluko nokuba ngamanye amaxesha asizifuni. Inkqubo ye- ithebhulethi kunye nepeni ergonomics. Xa unesandla sasekhohlo, ndikholelwe oku kubalulekile. Eli nqaku libonakalisiwe kwinkcazo yethebhulethi, cofa nje ithebhulethi.
Kwakhona ukufakwa kweglavu yeminwe emibini ukuze kungathinteli inkqubela phambili yomsebenzi ngelixa sizobe. Olu ncediso luhlala luza kwiimveliso eziphezulu kodwa sinokuzithenga sodwa. I-Bluetooth okanye uqhagamshelo lwentambo. Kwaye kwakhona, ukuba ipensile ineebhetri.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Uyikhetha njani itafile yemizobo yokuyila
fidel ulingana sitsho
Ulwazi lwezempilo olulungileyo kwiipilisi.
Ukuze ukwazi ukusebenza kwi-calligraphy, uhlobo kunye neeleta
Lithini icebiso lakho, enkosi.
Ozithobileyo, umbuliso onobubele kakhulu.
UFidel Igual «fidus grafikus»
Phendula kwi-fidel elinganayo
Kutheni le nto sifuna uqeqesho lube luyilo?
I-Instagram ingena kuzo zonke iimarike ukukhuphisana